မြန်မာကိုသိရန် လွယ်ကူသော်လည်း မြန်မာ့စိတ်ထားကိုသိရန်ခက်သည် ဟု နိုင်ငံခြားသား တို့ ပြောစမှတ် ပြုကြလေသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မြန်မာကိုသိရန် လွယ်ကူသော်လည်း မြန်မာ့စိတ်ထားကိုသိရန်ခက်သည် ဟု နိုင်ငံခြားသား တို့ ပြောစမှတ် ပြုကြလေသည်။
မြန်မာကိုသိရန် လွယ်ကူသော်လည်း မြန်မာ့စိတ်ထားကိုသိရန်ခက်သည် ဟု နိုင်ငံခြားသား တို့ ပြောစမှတ် ပြုကြလေသည်။
Posted by Good Idea on Sep 18, 2011 in Cultures, Know-How, DIY, Society & Lifestyle |6comments
အချို့က မြန်မာသည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး လူတစ်မျိုးဖြစ် သည်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့က မြန်မာများသည် ဒေါသမထွက်သည့်အခိုက်တွင် စိတ်နေစိတ်ထား အလွန်နူးညံ့ကြ သည်။ ဒေါသထွက်မိလျှင်မူကား ဘီးလူးသဘက်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုကြလေသည်။
တစ်ခါက အိန္ဒိယတိုင်း သားမိတ်ဆွေတစ်ဦးက “ကျွန်တော်တို့ ကုလားလူမျိုးများမှာ ဒေါသထွက်၍ လူကိုရိုက်မိလျှင် သွေးထွက်သည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရပ်တန့်ကြသည်။ ခင်ဗျာတို့ မြန်မာများမှာ သွေးနီနီရဲကို မြင်ရလျှင် ပို၍ကြမ်းကြုတ်လာသည်” ဟု စာရေးသူအား ပြောကြားဖူးပေသည်။
လူ၏စိတ်ကား ရာသီဥတုကဲ့သို့ ရှိ၏။ ခုတစ်မျိုး ခုတစ်မျိုးပြောင်းတတ်ပေသည်။ မြန်မာ့စိတ်သည် မြန်မာပြည် ရာသီဥတုနှင့် အလွန်တူသည်။ မိုးတွင်အခါ ကမ္ဘာကြီး အရည်ပျော်ကြမည်လောက် တစ်ရက်မစဲ တသဲသဲရွာ သွန်းလျက် နွေရာသီသို့ရောက်သောအခါတွင်လည်း လမ်းပေါ်တွင် ခြေမချနိုင်လောက်အောင် နေ့ညမခြား ပူပြင် တတ်ပေသည်။ သို့သော် ဆီးနှင်းများ ပိတ်ဆို့လျက် ကြာရှည်လေးမြင့်အုံ့မှိုင်းနြေ
ခင်းကား မရှိပေ။ နိုင်ငံခြားသား တို့ကား မြန်မာရာသီနှင့်တူသော မြန်မာ့စိတ်ကို တွေ့မြင်နေကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဦးပုည သေရခါနီးတွင် ရေးသားသွားသော လေးချိုးကလေ;ကို လူတိုင်းသိ၏။
အွန်လိုင်းမှာ စာလျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ http://jacbaburma.blogspot.com/2011/08/blog-post_2768.html ဒီဘလော့မှာ တွေ့လာလို့ ဘော်ဒါတွေ ဖတ်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီးတော့ ဆရာမောင်ဇေယျာများ ကြားမယ်ဆိုရင် ပြောလိုက်ချင်တာကတော့ “ဆရာရေ အရင်တုန်းက မြန်မာတွေကတော့ အခက်အခဲနှင့်တွေ့ ရလေလေ တင်းမာလေလေ၊ ဒုက္ခနှင့်တွေ့ရလေလေ မလျှော့သောစိတ်ဖြင့် ရွှင်ပျလေလေ ဆိုတဲ့အတိုင်း ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု မြန်မာတွေကတော့ ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံရေးလောကဓံကို မခံနိုင်ကြလောက်အောင် မောပန်းကြတဲ့အတွက် ရယ်စရာကို ရှာကြံပြီး ရယ်နေရတာပါ ဆရာရေ…”လို့။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာက်ကိုသိချင်ရင်တော့ တောရွာတို့ အညာတို့မှာ သွားကြည့်မှ ဖြစ်မယ်… မြို့ကြီးလေ လူလိမ်တွေပေါလေပဲ … နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် လိမ်ကြတယ် ……. မိမိအတွက် တိုင်းပြည်ကို သိက္ခာမချပါနဲ့ ………..
Good idea ရဲ့ အတွေးလေးကောင်းပါတယ်။ခုလိုဝေမျှပေးတော့ကျေးဇူးပါနော်။ဒီနေရာလေးကိုကြိုက်တယ်လေ……
“””တစ်ခါက အိန္ဒိယတိုင်း သားမိတ်ဆွေတစ်ဦးက “ကျွန်တော်တို့ ကုလားလူမျိုးများမှာ ဒေါသထွက်၍ လူကိုရိုက်မိလျှင် သွေးထွက်သည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရပ်တန့်ကြသည်။ ခင်ဗျာတို့ မြန်မာများမှာ သွေးနီနီရဲကို မြင်ရလျှင် ပို၍ကြမ်းကြုတ်လာသည်” ဟု စာရေးသူအား ပြောကြားဖူးပေသည်။”””
မြန်မာ ကိုသိဖို့ လွယ်ပေမဲ့ မြန်မာ စိတ်ထားကို သိဖို့ ခက်တယ် လို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကပြောတယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ နိုင်ငံခြားသားတွေက သိဖို့လည်းခက်တယ်၊ သူတို့စိတ်ထားသိ ဖို့ လည်း ပိုခက်ပါသေးတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာအများစုဟာ ပွင့်လင်း ကြတယ်၊ ရင်းနှီးခင်မင်လွယ်ကြတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေက မြန်မာပြည်လာတုန်းသာ ခဏ ဟန်ဆောင်ပြီး ချိုသာသလိုနေကြတာ။ သူတို့တိုင်းပြည်မှာအတည်ကြီးတွေရယ်။ အထူး သဖြင့် ဗြိတိသျှတွေပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက် မိတ်ဆက်မပေးရင် ရုပ်တည်ကြီးတွေပါ့။ မြန်မာတွေရဲ့  စိတ်ရင်း အမှန်က လူသားဆန်တယ်ဆိုတာ သူတို့ မလေ့လာတတ်ကြတာပါ။ Materialists မဟုတ်ကြဘူလေ။ ( အများစုကို ခြုံ ငုံပြောတာပါနော်)။
သွေးနီနီရဲရဲ ကို မြင် တိုင်းစိတ်ရိုင်း မဝင်တတ်ကြပါဘူး။ ငါ ၏ဦးခေါင်းသည် သွေးချင်းချင်းနီ သော်လည်း
ငါ ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် သာ ရှိကြတာပါ။
သေချာတာတခုတော့ရှိပါတယ်…နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါတိုင်းမြန်မာတွေက တဖက်က ပြောသမျှ စကားတွေကို ခတ်ပြုံးပြုံးလုပ်ပြီးခေါင်းတဆတ်ဆတ် လုပ်လေ့ရှိကြတာပါဘဲ။ တကယ်သိလို့လားလို့မေးရင် ဘာတခုမှမသိပါဘူးလို့ပြောရမလိုပါဘဲ။ ဒီအပြစ်ကင်းစင်ရိုးသားပြီးတဖက်သားကို အားနာပြီး ရှက်တတ် ကြောက်တတ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ သမိုင်းနောက်ကြောင်းခံနည်းလှတဲ့ မြန်မာ တို့ရဲ့ ဒိလို အပြုအမူကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ဒီနေ့အထိနားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။
ိမြန်မာတွေစိတ်ဓာတ်သိချင်ရင် ကျနော်တို. ရွာလိုက်ခဲ. ရွှေဘို မြို.နားမှာ
ထမင်းဖတ်ကျွေးတာ လိုက်မစားလို. ရွာသားက စိတ်တိုပြီး ဓားနဲ.လိုက်တာ တစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ် ရွာမှာ